VPS Inotungamira Chinyorwa: Hoe virtuele private bediener inoshanda?
09.05.2020 Category: Geen kategorie nie
* Kwidziridzo: Yakabviswa Guhat muVPS yemahara, yakawedzera cPanel mutengo shanduko, uye yakagadziridzwa mutengo we2020.
Kana zvasvika kune Webwerf hosting kune zvakawanda zvakasiyana zvingasarudzwa zviripo. Imwe neimwe ine yavo meriete, dzakasiyana mumhando uye mutengo mapenji. Nhasi tichave tichitora tarisa kuVirtual Private Server (VPS) yekutambira.
VPS yekubata inokubvumira kuti iwe uchengete yako yewebhu pfuma panzvimbo yakarongedzwa kuti itaridze uye unzwe sekumira yakamira sevha.
1 Chii chinonzi VPS Inotambira
1.1 Sei VPS Inogadzirisa Inoshanda?
1.2 Kubatsira kweVPS kubata
2 Yakagoverwa vs VPS vs Akazvitsaurira Server Hosting
2.1 Gedeelde gasheer
2.2 Toegewyde gasheer
Chii chinonzi VPS Inotambira
VPS inomiririra virtuele privaat bediener. ‘N VPS inzvimbo yakasarikwa-raam seva ine maitiro eese sevha pachayo. Izvi zvinoreva kuti iine iine yayo Chekushandisa System (OS), zvishandiso, zviwanikwa, uye nekumisikidza. Zvese izvi zvirimo mukati meimwe bediener rine simba. Imwe neimwe sevha inogona kuva neakaundi akawanda eVPS pazviri.
Sei VPS Inogadzirisa Inoshanda?
Sezvinoreva zita racho, nzvimbo yese yeVPS yekutambira inotenderera ichitenderedza. Nehunyanzvi uhu, maseva ese anogona ku’ganhurwa ‘uye kupihwa vanhu vakasiyana.
Ivo vanogovana sevha yemuviri imwe chete, asi imwe neimwe inowana zvakanakira kugona kugona kumisikidza yavo nzvimbo sekunge ndeyese yavo. Izvi zvinovapa huwandu hwepamusoro hwekushanduka pamwe nechinhu chakawedzerwa chekuvanzika – kune chidimbu chemutengo we server yakatsaurwa.
Tekinoroji yeVirtualisering inoongorora sevha yakazara uyezve inokamura zviwanikwa pakati peakaundi akasiyana zvichienderana nezvakabhadharwa nevaya rekening. Semuenzaniso, kana sevha ine 128 GB julle RAM, inogona kupatsanura iyo mumativi maviri kana anopfuura.
Mumwe nemumwe ane account anozopihwa huwandu hwe RAM sekutsanangurwa kwavo muchibvumirano chekubata. Izvo zviwanikwa zvakagoverwa kune imwe neimwe rekening ndezve rekening iyoyo uye hazvizobatwe mukati kana mamwe maakaundi achida kana kushandisa zvimwe.
Kusiyana kukuru pakati pekugoverana uye kugoverwa kweVPS ndiko kushandiswa kwevashandi venhare.
Kubva-raam imwe nzvimbo yekutsvaga, vPS anoreva:
Yakavimbiswa zviwanikwa – Memory, Inogadzirisa nguva, kuchengetedza, nezvimwe hazvizombofa zvakagoverwa.
Zviri nani saiti kuchengetedza – Webhusaiti yako (s) ichaitirwa munzvimbo iri kwayo joga. Kana chinhu chipi zvacho chikasarasika chikaitika kuaccount yemuvakidzani wako, hazvinei newe; uye
Yakakwira-graad met betrekking tot behendigheid – Ek is unowana-bediener-vlak rekutonga masimba akadai sekuwana midzi, sarudzo yeOS, nezvimwe.
Kubatsira kweVPS kubata
VPS kutonga ndiyo yakakwana yekutengesa, kushanda, kuchengeteka, kukwanisa, uye kuvanzika. Zvimwe zvezvinoshamisa zvinowanikwa iwe uchishandisa masangano ndeye;
Nhauriro yakagoverwa yemabasa
Zviri nani sevhisi yekuwana nehumwe hutungamiri
Yakasarudzika yaive nenzvimbo
Saizvozvowo yehutano hwemashumiro akaita sewaini yakatsaurirwa
Skaalbaarheid yekushandiswa kwenguva refu kwenguva refu
Yakagoverwa vs VPS vs Akazvitsaurira Server Hosting
Vamwe vanogona kuwana kuvhiringidzika kushoma nekuda kwekuwanda kwesarudzo kana zvasvika pakugovana, VPS, uye yakazvitsaurira kugamuchira. Ngatiitei pfupi ongororo uye enzanisa kuti tinzwisise zviri nani mutsauko wakakosha.
Kugoverwa kugoverana kwakafanana newe uri kugara mukamuri ine shamwari dzakawanda. Zvinoreva kuti iwe unofanira kukodzera munzvimbo imwe chete uye iwe unofanira kuparadzanisa mari yezvinhu zvakasiyana nokuti ndizvo inotengesa uye inodhura.
Nekudaro, kuve nevanhu vakati wandei kugoverana nzvimbo yakafanana zvinoreva kuti panofanira kuve paine imwe degree yekupa nekutora. Zviwanikwa zvinoda kugoverwa (semuenzaniso, vanhu vashanu vachitenderera kuti vashandise imba yekugezesa).
Izvi zvinoreva zvakare kuti izvo zvinokanganisa imwe shamwari zvinokubata iwe futi. Kana mumwe wevanhu vachigovana nzvimbo iyo ine furu – iwe ungatapukirwa zvakare. Zvese zviri mukamuri iyoyo zvinofanirwa kugoverwa pakati pewe (zvinonzwika zvisina hutsinye, handizvo?).
Kune vazhinji varidzi webhusaiti vermy vanosarudza kushandisa vakagovana mabasa ekugovana nekuda kwechinyore chikonzero icho chiri nyore kubata uye kwakachipa. Vanotakura vanovapa masevhisi vanozotarisira kuchengetedza sevha, saka ivo varidzi vewebhu vanongoda kutarisa pakuvaka uye kushanda kwavo saiti.
Kugovana zviwanikwa dzimwe nguva zvinogona kuva nemamiriro ezvinhu asingafano tarisiro. Semuenzaniso, kana imwe webhusaiti yaizobatikana zvakanyanya uye nekushandisa upfumi hwakawanda zviwanikwa, webhusaiti yako inogona kuramba yakamirira. Izvi zvinokanganisa mashandiro enzvimbo yako kuburikidza pasina mhosva yako. Tariro yako chete yekugadzirisa ndeyekuti enyo hogi yekuburitsa inoburitsa zviwanikwa zvairi kushandisa, kana kana webhu saiti yako ikapindira.
VPS-aanbieders van hosting: InMotion Hosting, TMD Hosting, BlueHost
Toegewyde bediener wat gasheer vir yakaita kuva muridzi weimba is. Iwe wakasununguka kutamira chero kupi zvako mukati meimba yako yaunoda. zvisinei, iwe unofanirwa kuribhadharira chikwereti uye zvikwereti zvingadhura.
Saizvozvo, mune chaiyo server yakazvitsaurira, ek is unobhadhara kune yese sevha haina kugoverwa nemumwe munhu. Ek is unozowana kudzora kwakakwana pamusoro peese masevhisi. Nehurombo, iyo zvakare yakanyanyisa kudhura yekusarudza sarudzo uye inoda humwe hunyanzvi hwekugadzirisa.
Iyo inowanzoshandiswa nevaya vane mawebhusaiti vane zvakananga zvinodiwa. HIERDIE inogona kusanganisira kukwanisa kubata yakakwira yewebhu verkeer kana yakawandisa kuchengetedza zvinodiwa.
Isu tave tabudisa mazano akawanda ekugadzirisa uye mazano anobatsira ekugadzirisa avo vari kutsvaga webhupu rekushandisa.
Nhamba yakakwana yevashandi vekugadzirisa yatakadzokorora
Nhungamiro: Matambudziko & mhinduro nezvakachipa zvewebhu webhu
Gesondheid: Kuchinja kubva kuHTTP kusvika kuHTTPS (SSL)
Nzira yekugadzirisa sei mabhizimisi emabhizimisi ebhizimisi renyu
Nzira yekutenga zita idzva kana kuti riripo
Nzira yekuendesa sei webhupu yekutora pasina nguva pasi
Rwendo rwekugadzirira kubata mazano tinokurudzira
VPS Inotungamira Chinyorwa: Wie virtueller privater Server Inoshanda?
VPS Inotungamira Chinyorwa: Hvordan virtuel privat server Inoshanda?
VPS Inotungamira Chinyorwa: Si Server Virtual Privat Inoshanda?
VPS Inotungamira Chinyorwa: Jak virtuální privátní server Inoshanda?
VPS Inotungamira Chinyorwa: kuidas virtuaalne privaatserver Inoshanda?
AccuWebHosting se sukses deur kliente-responsiwiteit
ʻO ka Scoopi sees ma nā Pae Lāhui
Hoe kan u die beeld in WordPress stabiliseer?
Soo bandhigida HostScore.net – Habka Cusub, Xogta-Daran und Loogu Talagal In Loo Doorto Martigaliyaha Websaydh
15 Must-Know Plugins- ը դուստր ձեռնարկատերերի համար
Gingde blọgụ maka Mwakpo: Otu esi amalite Blogi nke ọma na 2020
Премиум WordPress тематични сайтове zure negozioa nabarmentzen laguntzeko
Etzigues que es pot reproduir a WordPress?
Ƙirƙirar takarda a ONG de WordPress
Onlayn oxu qurmaq üçün pulsuz telefon konfranslarından necə istifadə etmək olar
8 millors complements de compartició social Kay WordPress
70 + Handige kragopwekkers is ‘n slim / lui ontwikkelaar
Как Tristan Hervouvet изгради ImageRecycle от 0 до 1 000 000 000 изображения
Na Basebeletsi ba Hao ba Basebetsi ba Tseba Tlhoko ea Basebetsi?
KSNUMKS resursu üçün yeni bir qanun tətbiq oluna bilər
دليل مفصل (جدا) عن أن تصبح سلطة في مكانك
Բլոգերի լավագույն փորձը շահույթ չհետապնդող բլոգերի համար
Die Grundlagen von .htaccess: Verwendung und Beispiele
Sharlanov Valentini de WebHostFace PRAEIUDICATUS de acetabula，salva privatam Duis egestas elementum risus
Kuidas lahendada mõni probleem oma veebiga
Astudiaeth Achos：Sut Mike Moloney自举FilterGrade
9 Wenke vir doeltreffende Pinterest-bemarking
5 raons per les quals el màrqueting de contingut sempre triomfarà la creació d’enllaços
Njia za 9 Blogger ya kibinafsi Inaweza kugeuka kwenye Blogger ya Nische
Myšlenky na název blogu: Tipy pro výběr perfektního jména pro váš blog
See on kõige huvitavam viis päeva Google’i han Wopirepiresi jaoks
49 Съвети за доказани данни за това как да получите повече ретуити
Warum (und wie) Sie Ihren Firmennamen kennzeichnen: Meine persönliche Geschichte + nützliche Tipps von Anwälten
30+ millors llocs que ofereixen fotos i imatges gratuïtes per als blocs
Paano Mag-access sa Madilim na Web: Pag-browse sa Madilim na Web، TOR Browser، at. Mga Website sa Lito
7 tècniques de narració d’històries per guanyar la vostra lectura de blocs
Pisinisi Tumaoti（VPN）：O Ta Taiala Faʻapitoa mo Foubies
Пълно ръководство ku Twitter Chat за собственици на малък бизнес
18 Temat e WordPress Nga WooThemes Shqyrtuara
10 قواعد أساسية لتسويق Instagram الفعال
Maya wasta võrk (VPN): juhend Pohara wincikan pikeun Newbies
كيفية استضافة موقع: دليل المبتدئين الكامل
آپ کے بلاگ کے لئے ویڈیو مارکیٹنگ کے ساتھ کسی طرح شروع کرنا – Իկ مختصر Գաիڈ
YouTube monetarisieren: Wie YouTubers ihr Geld verdienen
Aufbau eines Stammes um deine Kunst; Eine schöne Person zu einer Zeit
On uiuinga Tukutuku Tukutuku: DTS-NET CEO, Craig Gendrolas
Bəli, bizdən başqa bir şey yoxdur.
I-5 Inyathelo Yokubhala Ibhulogi Ye-Blog Ethi wird viral
اتقان مهمة كرون وأتمتة مهام الخادم الأساسية
8 Mafi yawan kuskuren WordPress da kuma iadda za a gyara su
Վիքիպեդիան չե՞ք գործում:
Google Plus Post qarşılıqlı münasibətlərinizi 8.400% necə yaxşılaşdırmaq olar?
Obnova en upravljanje ugleda spletnega mesta po skupnem izpuščanju
Umbes nii, nagu Die Owo kuulutab: Awọn Eroye Ero & Awọn Ogbon
استضافة سكالا: Tenens nova الموثوقية مستوى الإعلان
Kulemba Mabulogu a Ma Dummies: Momwe Mungayambitsire Blog Yopambana mu 2020
قارن أفضل 5 عملاء FTP لووردبريس
Как работят супер блогърите: постигане на ефективност с график на блога
Hoe u Google Kalender by u WordPress-webwerf kan voeg
Oxucuların məşğul olmasına dair vampir gündəliklərindən nə öyrənə bilərsiniz
Wolle jo jo domein fan Naamkaart van GoDaddy kry?
Ինչպես սկսել սննդի բլոգ WordPress- ի հետ